J. Hoose oo 2-1 uga badisay Sanaag & Baay oo 3-0 uga badasiday Galgaduud. – Radio Daljir
J. Hoose v Sanaag (2-1)
Ciyaarta 1-aad ayaa dhex martay xulalka J. Hoose & Sanaag. Ciyaarta oo ahayd mid aad u adag ayaa ku dhamaatay 2-1 oo ay guushu ku raacday xulka J. Hoose. Xulka J. Hoose ayaa u gudbay wareega 2-aad ee ciyaaraha, halka gobolka Sanaag ay ku hareen wareega 1-aad.
Ciyaarta ayaa ku dhamaatay 5-1 oo ay guushu ku raacday xulka J. Dhexe.
Ciyaarta 2-aad oo ahayd ciyaar hal dhinac ah, dhinac kasta oo laga eego ciyaartana ay ku gacan sareeyeen ciyaartoyda gobolka Baay, ayaa dhex martay xulalka Baay v Galgaduud.